तपाईंले लामो holili र बाली काट्ने भेला कसरी पहिले नै योजना, आफ्नो अङ्गुर पोषित, तर अचानक उहाँले आक्रमण भएको थियो powdery फफूंदी? एक समस्या, दबाइ "पुखराज" तपाईंको सहायता हुनेछ छ।
मतलब "पुखराज" यो धेरै रोगजनकों प्रभावित गर्न सक्षम छ systemic fungicide, टी। ई छ। यस्तो पत्थर फल, pome फल, जामुन, तरकारी र Ornamental बिरुवाहरु रूपमा बाली जोगाउन प्रयोग। विशेष मा, एक दबाइ व्यापक खीरे, स्ट्रबेरी, बोटहरू, चेरी, स्याउ को रोगहरु को उपचार मा प्रयोग, र यति मा। डी सक्रिय संघटक penconazole छ।
तयारी पुष्टि गर्छ जो यो लाभ छ (जब यस्तै हालतमा संग तुलना) "पुखराज", प्रयोगको लागि निर्देशन। यसरी, यो धेरै संस्कृति मा यस्तो powdery फफूंदी रूपमा रोगहरु विरुद्ध लड्न, मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। को तैयार सक्रिय संघटक को पर्याप्त एकाग्रता बोट उपचार को आवृत्ति कम गर्छ।
दबाइ "पुखराज", को प्याकेजिङ्ग मा स्थित छ जो प्रयोगको लागि निर्देशन, यो चाँडै बिरुवाहरु द्वारा अवशोषित हुन्छ। यो सुविधा सुविधा टाढा धोए गरिने likelihood कम वर्षा द्वारा।
एउटै समूहका अन्य लागूपदार्थको यसको अनुकूलता धन्यवाद, "पुखराज" मतलब एकीकृत बोट सुरक्षा कार्यक्रम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, कुनै पनि मामला मा एक साथ धेरै पदार्थ प्रयोग गर्न पूर्व एउटा सानो रकम मिश्रण द्वारा परीक्षण गर्नुपर्छ।
दबाइ "पुखराज" को वैधता, प्रयोगको लागि निर्देशन जो इंगित गर्दछ कि, दुई र तीन हप्ता बीच औसत, मा। रोग मात्र गतिविधि को माध्यम समयमा विकसित गर्दा एक समयमा 10 दिन कम हुन सक्छ। यो तयारी एक धेरै उच्च प्रभाव गति छ। पहिले नै 2-3 घण्टा पछि mycelium वृद्धि विरलै तल slows।
सर्वेक्षण को परिणाम स्वरूप यो उपकरण बिरुवाहरु कुनै विषाक्त प्रभाव छ फेला परेन, टी। ई fungicide डाटा संग उपचार फल को खाने बिल्कुल अहानिकारक छ।
दबाइ सबै आवश्यक जानकारी जसमा "पुखराज", प्रयोगको लागि निर्देशन, निम्नलिखित राम्ररी प्रयोग गर्नुपर्छ। एक एजेन्ट पानी एउटा सानो रकममा पतला सक्रिय पदार्थ को2एमएल समावेश, र त्यसपछि संग शीशी एक बाल्टिन (10 एल) मा हालिएको। इन्डोर बिरुवाहरु को उपचार मा, vials सामग्रीहरू तरल पदार्थ को5लिटर थपिएको थियो।
दबाइ "पुखराज" को प्रयोगको लागि निर्देशन पकाउने एजेन्ट सीधा उपयोग गर्नु भन्दा पहिले समाधान सुझाव दिन्छ। यस्तो अवस्थामा सक्रिय घटक को प्रभावकारिता धेरै उच्च छ र साधन को आवेदन राम्रो हुनेछ। यसको तयारी पछि दिन दबाइ प्रयोग नगर्नुहोस्।
2 हप्ता - दबाइ को प्रयोग एक निश्चित अन्तराल भेट्न संकेत जो यो आवश्यक छ "पुखराज Ke", प्रयोगको लागि निर्देशन। रोकथाम लागि प्रक्रिया देखाउन राम्रो परिणाम। यस मामला मा, समाधान एकाग्रता आधा द्वारा लगभग कम छ।
कति प्रत्यक्ष मानिसको टाउको बाहिर जुम्रा?
स्याउ को किरा हुन् र तिनीहरूलाई कसरी लड्न
प्रशासनिक व्यवस्था विषयको
प्रकृति मा संचालित क्रेन: विशेषताहरु र रोचक तथ्य
आफ्नै हातमा बोर्ड इस्त्री: निर्माण प्रविधि
विश्वसनीय जानकारी उदाहरणहरू। जानकारी को विश्वसनीय स्रोतबाट